Downloads 26 508
Zvinosanganisira 6 mhando uye 11 textures. Zvinosanganisira ano rakapotsa Cockpit uye 2D remadziro. Uyewo zvinosanganisira tsika ruzha, kunobudirira burner Chaizvoizvo, vakawanda Animations. Musakanganwa kuverenga Handbook.pdf.
The Lockheed Martin F-35 Mheni II ndiyo mhuri chete chokuyananisa, kuroorwa-injini, cheshanu chizvarwa multirole vanodzima pasi kukura kuita pasi kurwisa, ushori, uye mhepo kudzivirira mishoni pamwe namano kugona. The F-35 ane mienzaniso mikuru mitatu; ari F-35A ari akawanda yasimuka uye kumhara musiyano wezvinyorwa, uye F-35B ari pfupi kubvisa uye kutwasuka-kumhara musiyano wezvinyorwa, uye F-35C ari mutakuri-inobva musiyano wezvinyorwa.
The F-35 iri vakabva X-35, kungoerekana Joint Urayai Fighter (JSF) purogiramu. JSF budiriro ari anonyanya mari neUnited States, pamwe United Kingdom uye dzimwe hurumende nemumwe kupa mamwe mari. Marudzi nemumwe inhengo kana NATO kana pedyo US vanotsigirana. It ari chakagadzirirwa uye yakavakwa ane Aerospace indasitiri chikwata rinotungamirirwa Lockheed Martin. The F-35 kuitwa ndege yayo yokutanga musi 15 December 2006.
The United States anoronga kutenga dzinokwana 2,443 ndege kupa unorema yayo tactical airpower nokuda US Air Force, Marine Corps uye Navy kwemakumi emakore kuuya. The United Kingdom, Italy, Netherlands, Australia, Canada, Norway, Denmark, Turkey, vaIsraeri uye Japan tiri chikamu chirongwa kugadzirwa uye kuti kutishongedza zvavo mhepo mabasa pamwe F-35 (Wikipedia)